रबि लामिछानेले खेलाए १ लाखकाे गेम, अब कस्ले जित्ला ? – Khula kura
रबि लामिछानेले खेलाए १ लाखकाे गेम, अब कस्ले जित्ला ?
चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले भाेलि बाट कामका कुरा प्रशारण गर्ने भएका छन् र प्रशारण गर्ने बेला उनले एउटा नयाँ खेल पनि लिएर अाएका छन् ।
भोलि बाट म “कामका कुरा” गर्दैछु। टेलिभिजनहरु घरको भित्तामा मात्र सिमित नभएर मान्छेको पकेट पकेट्मा पुगिसकेको आजको जमानामा प्रविधि सँगै बदलिनै पर्छ।
समस्त टेलिभिजन क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने लक्ष्य सहित यो अ’वधा’रणा ल्याएका छौं। बदलिदो प्रविधिले अवसर सँगै थपेको चु’नौ’तीलाई स्वीकार गर्दै १ लाख पुरस्कार जित्न सकिने नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्दैछौं।
कठिन त छ तर असम्भव चाहिँ छैन र नयाँ प्रयोगहरुमा मलाई कति पनि डर लाग्दैन। समग्रमा कार्यक्रमको यो सिजन नै एक किसिमको ट्रा’यल हुनेछ। यो गेममा अझै पनि अनेकौं प्राविधिक झमेला कायमै छन्।
प्राविधिक रुपमा अलि बढी जानकार बाहेककालाई अझै पनि रजिस्ट्रेशन गरेर गेम खेल्न कठिनाइ नै हुनेछ।धेरै सम’स्या स’माधा’न भैसके ,केही अझै बाँकी नै होलान्। कस्तो हुन्छ, कति एपिसोड हुन्छ, हुन्छ कि हिदैन जस्ता सबै प्रश्नको एउटै उत्तर हो, को’शिश गर्नेहरु कहिलेपनि हार्दैनन्।
विदेशी टेलिभिजन र एपहरुलाई हामी पैसाले जित्न सक्दैनौं तर आइडियाले पछार्न सक्छौं। विदेशी च्यानल सँगै मोबाइल एपहरु अहिले हाम्रो खल्ती खल्तीमा पुगिसकेको अवस्थामा यो गेम सफल हुन सक्यो भने दी’र्घकाली’न रुपमा यसले नेपाली टेलिभिजनको चाहिँ गेम चेन्ज गरिदिनेछ। संचार माध्यमलाई बजार र राजनीतिले जब सम्म नियन्त्रणमा राख्छ तब सम्म कोहि निडर,नि’र्भी’क र स्वत’न्त्र हुन सक्दैन।
विश्व बजारसँग प्र’तिश्प’र्धा गर्न छो’डेर नेपाली संचार माध्यमहरु एक अर्का बीच नै लड्यौ र अल्मलियौ भने बिदेशी च्यानलले हामीलाई सिध्याउछन् र त्यति बेला पनि बजारमा ताल्चाहरु छ्यापछ्यप्ती पाइनेछन् । ढोकामा होइन, मुखमा लगाइने ता’ल्चाहरु।
यो गेम र यसको पछाडीको आइडिया मार्फत हामी यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा बद्ल्ने प्रयास गर्दैछौं।यो सिजन गार्‍हो हुन्छ, सहिदिनु होला। आफुले भोगेका सम’स्या कमेन्टमा लेख्नु होला। प्रत्येक कमेन्टलाई हेरेर हाम्रो टिमले उपाय बताउने प्रयास गर्नेछ।
बाँकी देखा जाएगा। भोलि कसले देख्या छ र??
पोखरेलद्धारा मुख्यमन्त्री दाबी (पत्रसहित)